Shiinaha Cayayaanka - Enge Biotech
Kusoo dhawow Shirkadeena
Shirkadda 'Enge Biotech' waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee soosaara cilmiga beeraha ee Shiinaha, waxay si gaar ah ugu hawlan tahay Cayayaanka, Fungicides, Herbicides, jaangooyooyinka koritaanka dhirta, Bacriminta, wax soo saarka qaraabada iyo adeegga.Waxaan siineynaa beero-kimikal badbaado leh oo la isku halleyn karo, sunta cayayaanka iyo alaabada tikniyoolajiyadda la xiriirta suuqa adduunka, si bixinno adeegyo si loo helo cunto caafimaad leh oo ku filan, wasakh yar iyo haraaga, ilaalinta nolosha iyo bey'adda, waxaan siineynaa macaamiisheenna tayo sare iyo kala duwanaansho weyn, soo dhowow booqashada shirkadeena!
inbadan arag nala soo xiriir
Dhammaan wax soo saarka waxay ku hoos jiraan heerka Qaranka iyo ISO9001, waxaan sidoo kale taageernaa SGS iyo tijaabada kale ee saddexaad
Soo saare Xirfad leh
Enge Biotech waxay ku taal Shijiazhuang Hebei, Shiinaha. ku hawlan soo saarista beero-kimikada oo ay ka mid yihiin Cayayaanka, Fungaska, Dhirta, Isuduwayaasha koritaanka dhirta iyo Bacriminta. Kooxdayadu waxay in ka badan 20 sano khibrad u leeyihiin soo saarista sunta cayayaanka. Taageer in ka badan 50 walxaha diiwaangelinta (ICAMA) iyo awood xoog leh oo ku saabsan alaabta cusub ee R & D.
Taageer diiwaangelinta mashruuca
Kuwa ugu xoogga badan
Adeegga macaamiisha, qancinta macaamiisha
Warshadaha Enge ayaa si adag u xakameynaya tayada wax soo saarka, wax soo saarka oo dhami waxay ka hooseeyaan heerka Qaranka iyo ISO9001, waxaan sidoo kale taageernaa SGS iyo tijaabada kale ee saddexaad.
Beeristu waa waxa ugu weyn adduunka, Qiimahayaga iyo ujeedkeenu waa inaan kobcino nolosha kuwa waxsoosaara iyo kuwa wax cuna, iyadoo la hubinayo horumarka soo-galayaasha soo socda.
Kooxdayadu waxay in ka badan 20 sano khibrad u leeyihiin soo saarista sunta cayayaanka. Taageer in ka badan 50 walxaha diiwaangelinta (ICAMA) iyo awood xoog leh oo ku saabsan alaabta cusub ee R & D.
Sida saxda ah ee loo isticmaalo Difenoconazole？
Waxtarka sare, Sumowga hooseeya, Sunta-baahinta baahsan ee baahsan-Difenoconazole
Cudurada ku dhaca Tamaandhada
Jaangooyaha koritaanka dhirta DA-6
Tiamethoxam vs imidacloprid
No.158, Wadada Bariga Huaian, Degmada Yuhua, Shijiazhuang, Shiinaha
0086-13933032315 chat WeChat / Whatsapp）